Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Mitohy ao FRAPORT ny fanarenana isa ny mpandeha
Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ao amin'ny FRAPORT Seranam-piaramanidina entana dia mahita fitomboana matanjaka kokoa, manasongadina ny toeran'ny FRA amin'ny maha foibe fitaterana an'habakabaka an'i Eropa. Ny seranam-piaramanidina Fraport Group manerantany koa dia manoratra ny tombom-barotra.
The Ny tarehimarika momba ny fifamoivoizana Fraport tamin'ny volana Jona 2021 dia mampiseho fanarenana mazava amin'ny isa mpandeha.
Tamin'ny volana Jona 2021, nitohy nihatsara ny fifamoivoizana nataon'ny mpandeha, na teo aza ny fiatraikan'ny areti-mandringana Covid-19.
Ny isan'ny fifamoivoizana ao FRAPORT dia maneho fitomboana efa ho 200 isan-jato raha oharina amin'ny Jona 2020.
Na izany aza, ity tarehimarika ity dia mifototra amin'ny sanda benchmark ambany voarakitra tamin'ny volana jona 2020, raha nihena ny fifamoivoizana tao anatin'ny fiakaran'ny tahan'ny aretina Covid-19. Tamin'ny volana nitaterana, ny fihenan'ny tahan'ny tranga Covid-19 sy ny fanesorana bebe kokoa ny fameperana ny dia dia nitohy nisy fiatraikany tamin'ny fitakiana fifamoivoizana. Sambany hatramin'ny nipoahan'ny areti-mandringana, ny seranam-piaramanidina Frankfurt indray dia nandray tsara mpandeha mihoatra ny 80,000 tao anatin'ny iray andro, noraketina an-tsoratra tamin'ny roa andro nitokana tamin'ny Jona 2021.
Raha ampitahaina amin'ny pre-pandemiatika Jona 2019, ny FRA dia nanoratra fihenan'ny mpandeha 73.0 isan-jato tamin'ny volana nitaterana.1 Nandritra ny tapany voalohany tamin'ny taona 2021, mpandeha 6.5 ​​tapitrisa no nanompoan'ny FRA. Raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana enim-bolana mitovy amin'ny 2020 sy 2019, izany dia mampiseho fihenan'ny 46.6 isan-jato ary 80.7 isan-jato.
Ny seranam-piaramanidin'i Ljubljana (LJU) any Slovenia dia nandray mpandeha 27,953 608,088 tamin'ny volana nitatitra. Tao amin'ny seranam-piaramanidina Breziliana ao Fortaleza (FOR) sy Porto Alegre (POA), tafakatra 806,617 ny mpandeha. Tao an-drenivohitr'i Peroa, ny seranam-piaramanidina Lima (LIM) dia nandray olona 2021 tamin'ny volana Jona XNUMX.